Kheyraadka - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 2)
Xagaaga ayaa soo socda oo ay la socdaan isbeddelada shabakadaha, halkan waxaan kuugu daynaa boggaga ugu fiican si aad u soo dejiso vectors asalka xagaaga.
saxeexyada emailka asalka ah
Ma doonaysaa inaad haysato saxeex iimaylka asalka ah? Halkan waxaan ku sharaxaynaa sababta aad u leedahay saxeexyada iimaylka asalka ah iyo sida loo sameeyo.
Ma u baahan tahay bogag si aad u soo dejiso vectors baabuurta? Halkan waxaan ku samaynay raadinta kuwa ugu fiican ee hawshan.
Fallaaro loogu talagalay Microsoft PowerPoint
Waxaa jira kumanaan iyo kumaankun bogag shabakad ah, halkaas oo aad ka heli karto falaadhaha bandhigyadaada PowerPoint, qoraalkan, waxaanu ku tusi doonaa.
calaamadaha duugista; mabaadi'da aasaasiga ah iyo tusaalooyinka
Waxaan kuu keenaynaa taxane ah mabaadi'da aasaasiga ah iyo walxaha lagama maarmaanka ah oo ay tahay inaad tixgeliso markaad samaynayso calaamadda duugista.
Qaababka erayada ee warbixinnada
Qaar ka mid ah moodooyinka ugu fiican ayaa laga heli karaa internetka. Maqaalkan, waxaan ku tusineynaa halka aad ka heli karto kuwa ugu fiican ee Word.
Xarfaha Chicano ee tattoo
Miyaadan waxba ka garanayn tattoos-ka Chicano? Ha werwerin, halkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan waxa ku saabsan iyo waxa ku saabsan xarfaha Chicano ee tattoos.
Daabacaaddan waxaan kuugu soo qaadanaynaa isku-dubarid qaar ka mid ah xarfaha aroosyada ugu fiican iyo sidoo kale isku-dhafka gaarka ah ee naqshadahaaga.
Ma u raadinaysaa muunad banner majaajillo ah macaamiishaada bilaash? Halkan waxaa ah mockups banner ugu fiican ee bilaashka ah.
Ma u baahan tahay maaweelo shaabad bilaash ah? Waxaan sameynay raadinta kuwa ugu fiican ee stamp-ka bilaashka ah.
Waxaan kuu soo aruurineynaa qaar ka mid ah xarfaha ugu wanaagsan ee Art Deco, iyo sidoo kale ka hadalka saameynta dhaqdhaqaaqan.
Haddii aadan weli aqoon font-ka loo dooranayo cinwaan wanaagsan, qoraalkan, waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo xarfaha ugu fiican.
astaanta astaanta dharka raaxada
Waxaan kuu soo qaadanaynaa xulashada qaar ka mid ah calaamadaha caanka ah ee caanka ah ee caanka ah ee caanka ah ee caanka ah ee adduunka.
Maqaalkan, waxaanu ku soo qaadanaynaa xulashada qaar ka mid ah farta rusticka ugu fiican ee lagu shaqeeyo.
Waxaan kuugu soo gudbineynaa daabacaadan liis qoraallo kala duwan oo sawir-qaade ah oo ay tahay inaad ogaato oo aad soo dejiso.
Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonaa sida warqadda Ingiriisiga hore ku timid, iyo sifooyinka ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa u isticmaala Twitch socodkaaga, nasiib baad leedahay. Tababarkan, waxaan ku sharaxnay sida loo abuuro emoticons gaar ah.
Si dib loogu noqdo wixii hore, waa lagama maarmaan in la barto. Sababtan awgeed, qoraalkan, waxaan ku tusineynaa xarfaha hore iyo isticmaalkooda.
Sida loo sameeyo PowerPoint xirfad leh
Ma doonaysaa inaad ogaato sida loo sameeyo Barta Awooda ee xirfada leh? Halkan waxaan ku sharaxay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u gaarto.
Maxay yihiin iyo halka laga helayo sawirada 3D
Haddii aad raadinayso sawirada 3D ee mashaariicdaada, maqaalkan waxaan ku magacaabi doonaa qaar ka mid ah bangiyada sawirka 3D ee ugu fiican.
Ma jeceshahay xarfaha Jabbaan oo ma rabtaa inaad u isticmaasho mashaariicdaada? Waxaan kuu samaynay raadinta xarfaha ugu fiican adiga.
far-gacmeed lagu qoray
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan uguna shaqeeya xarfaha gacanta lagu qoray ee naqshadahaaga, waxaanu mid mid kuugu soo bandhigaynaa.
Dad badan ayaa go'aansada in ay shaqadooda ku soo bandhigaan internetka iyaga oo isticmaalaya portfolio online ah.Ma rabtaa in aad ogaato sida loo sameeyo?
Ma doonaysaa in aad ogaato farta qoraal-qoraalka ugu fiican? Waxaan samaynay raadinta xarfaha ugu fiican mashaariicdaada.
Galbeedka hore waxaa lagu arki karaa in lagu matalo xarfaha. Maqaalkan, waxaan ku sharxeynaa waxa qormada galbeedku yahay, iyo waxa loogu talagalay.
Farta Celtic waxay ahaayeen kuwo aad u gaar ah waqtigooda. Maqaalkan, waxaan uga hadlaynaa si faahfaahsan, waxaanan ku tusinaa tusaalooyin.
kala duwan oo cagaaran
Ma ogtahay in midabka cagaarka ah uu ka kooban yahay habab kala duwan? Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa mid mid waxaanan kuu sharxeynaa hawlahooda.
Naqshadeeye ahaan waa inaad aqoon u leedahay midabada dhexdhexaadka ah, haddii aadan weli garanayn isticmaalkooda iyo isku-darkooda qoraalkan waxaan ku caawin doonaa.
Shakhsinimada summadaha qabsaday dadweynaha
Shakhsinimada calaamaddu waa kheyraad ka guulaysta noocyada kala duwan. Maqaalkan waxaan kuu sheegaynaa wax walba oo ku saabsan farsamadan.
Courier Cusub, qoraal qoraal ah oo leh taariikh
Courier New waa weji farmaajo leh oo taariikh inoo leh dhammaanteen, qoraalkan waxaan kuugu sheegi doonaa naqshadeeda iyo horumarkiisa waqti ka dib.
Calaamadaha dukaanka qaxwaha ugu caansan
Waxaan kuu keenaynaa xulasho ah astaanta dukaanka qaxwaha ee caanka ah ee adduunka oo dhan si aan kuu dhiiri geliyo.
Sida loo sameeyo palette midab gaar ah
Haddii aadan aqoon waxa ay tahay iyo sida loo sameeyo palette midab leh, daabacaadan waxaan ku caawin doonaa oo aan xallin doonaa dhammaan shakiyadaada.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nooca Avenir
Daabacaaddan waxaan kuugu sheegaynaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato taariikhda iyo horumarka nooca Avenir.
Noocyada nambarada tattoos
Daabacaaddan waxaan kula hadalnaa oo ku tusinaa noocyo kala duwan oo lambarro ah oo loogu talagalay tattoos kuwaas oo lagugu dhiirigaliyo.
majaajilo khamri ah
Weligaa ma is weydiisay haddii ay habboon tahay inaad macaamiisha qaar ka mid ah majaajilada khamriga u haysatid? Halkan waxaan kaga tagnay isku-dubarid boggaga ugu fiican.
sawiro bilaash ah
Weligaa ma u baahday sawirro si aad mashruuc u muujiso? Waxaan sameynay raadinta boggaga sawirada bilaashka ah ee ugu fiican.
Daabacaadan waxaad ka heli doontaa door yar oo ah qaabab garaafyo kala duwan oo lagu dhiirigaliyo.
Weligaa ma ku fikirtay inaad macaamiishaada u yeelato dhawr tusaale oo majaajillo ah? Halkan waxaan ku tusinaynaa xoogaa agabka shaqada ah
Taariikhda iyo horumarka ka dambeeya astaanta Pixar
Haddii aadan weli garaneynin taariikhda iyo horumarka sumadda Pixar, halkan waxaan kuugu soo gudbineynaa wixii la cusub.
Halkee laga heli karaa sawiro xallin sare leh
Waxaan kuu sheegaynaa bangiyada sawirka ugu fiican halkaas oo aad ka heli karto sawirro heer sare ah.
Miyaad ka fikirtay inaad macaamiishaada u yeelatid mockup mockup montage? Hagaag, waxaanu kuu keenaynaa xulasho bogag si aad u sameyso.
Tusaalooyinka calaamadaha shirkadda dhismaha si ay kuu dhiirigeliyaan
Waxaan soo bandhigeynaa xulashada calaamadaha shirkadaha dhismaha ee kala duwan kuwaas oo awooday inay aqoonsigooda gaarsiiyaan heer kale.
Qaababka qoraalka furaha ee bilaashka ah ee bandhigyadaada
Haddii aad ka fekereyso inaad sameyso bandhig leh qaab gaar ah, maqaalkan waxaan kuugu keenaynaa qaababka Keynote ee bilaashka ah ee ugu fiican.
Kala duwanaanshaha midabka: isticmaalka iyo isku dhafka
Doorashada midabka midabka sida waafaqsan astaanta aan la shaqeyno waxay noqon kartaa mid adag, daabacaadan waxaan ku siineynaa xoogaa talo ah.
Isticmaalka meel cad ee naqshadeynta garaafka
Waxaa jira meelo banaan oo kala duwan oo loogu talagalay naqshadaynta, daabacaadan waxaan ku sharaxnay waxay yihiin iyo waxay u shaqeeyaan.
Taariikhda iyo horumarka astaanta Unilever
Daabacaaddan waxaan kaga hadli doonaa taariikhda iyo kobcinta astaanta Unilever, bilawgeedii ilaa hadda.
Haddii aad tahay qof jecel nashqadeynta boodhka filimada, waxaad ku jirtaa nasiib. Maqaalkan waxaan ku magacownaa daboolka filimada caanka ah ee ugu caansan.
Haddii ay tahay inaad soo bandhigto mashruuc sawirka sumadda leh, waxa aad u fiican inaad hesho majaajilada summadaynta si ay u soo baxaan.
baqshad majaajillo ah
Ma waxaad raadinaysaa majaajilo baqshadda? Markaa waa inaad ogaataa kuwan aan kuu soo bandhigno, kuwaas oo aad ku soo bandhigi doonto shaqo soo jiidasho leh.
Haddii aadan weli aqoon calaamadaha biirka ugu muhiimsan adduunka oo dhan, waxaan ku tusi doonaa waxa ay yihiin.
Ma waxaad raadineysaa maaweelo Instagram ah si aad uga dhigto bandhigga mashruucaaga macmiilka mid soo jiidasho leh? Isku day kuwan aan kaaga tagno.
Noocyada cinwaanada cinwaanada
Ma u baahan tahay inaad mashruuc samayso oo ma waxaad u raadinaysaa xarfaha magacyo? Halkan waxaan ku siinaynaa xulashada weji-qoraalka cinwaannada. Soo ogow iyaga!
Tusaalooyinka naqshadaha qoraalka
Xarfaha ayaa muhiim u ah qaybta naqshadeynta. Maqaalkan, waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah naqshadaha qoraalka ugu wanaagsan iyo sida loo sameeyo.
7-da Sare ee ugu Sarreysa Buraashka
Maqaalka soo socda waxaan ka hadli doonaa app sawir-gacmeedka dhijitaalka ah waxaanan ku siin doonaa todobada burush ee ugu fiican Procreate.
Serif vs Sans serif. Weligaa ma is weydiisay faraqa u dhexeeya labada farood? Hoos ka ogow!
Mawduucyada PowerPoint bilaashka ah ee ugu fiican
Maqaal ku saabsan mawduucyada PowerPoint bilaashka ah ee ugu fiican ee bandhigyadaada. Geli oo dooro midka aad ugu jeceshahay daqiiqado gudahood.
Codsiyada si loo abuuro logos
Ma waxaad raadinaysaa abka si aad u abuurto calaamado? Waxaan kuu dhaafnaa talooyinka qaar oo ku anfacaya si aad u abuurto calaamado.
xarfaha wax lagu qoro
Soo hel xulashada xarfaha qoraallada lagu qoro oo lagu naqshadeeyo mashaariicda asalka iyo hal-abuurka leh. Kee baad door bidaysaa?
Ma garanaysaa waxa uu yahay infographic? Ka warran naqshadaynta macluumaadka? Soo hel wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kheyraadkan soo koraya
Haddii aad naqshadayso bandhigyada oo aadan weli garanayn templateka aad isticmaalayso. Maqaalkan, waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah qaababka xirfadleyda ee PowerPoint.
Ma ogtahay in si la mid ah farta Roomaanka ay u jiraan farta Masaarida? Maqaalkan waxaan ku sharaxaynaa waxa ay yihiin iyo shaqadooda
Haddii aad waligaa dooratay laba ama xitaa toban far oo aanad garanayn waxaad samaynayso, qoraalkan waxaan ku tusi doonaa xalka.
Haddii aad wali raadinayso burushyada Procreate oo aanad garanayn mid ka fiican ama mid aad ku dheggan tahay, qoraalkan waxaan ku tusinaynaa baakadaha ugu fiican.
Waxaa jira farta mustaqbalka inoo horseeda, qoraalkan waxaan uga hadlaynaa farta mustaqbalka, waxaanan ku tusinaa tusaalooyin.
xarfo cabsi leh
Ma waxaad raadinaysaa xarfo laga naxo? Hagaag, halkan waxaan ka soo uruurinay dhowr internetka oo ku caawin kara. Bal eeg iyaga!
Weligaa ma ku qasbanaatay inaad u samayso buug-yaraha macmiilka? Waxaan kuu daynaa tusaalooyin buugyaraha qaarkood si aad u hesho dhiirigelin.
Waxaan ku siinaynaa qaar ka mid ah qaababka xarfaha bilaashka ah si aad u furfurto hal-abuurkaaga oo aad si fudud u baran karto.
Sooyaalka qurxoon ee PowerPoint
Haddi aanad wali garanaynin taariikhda aad lasocoto bandhigaada Maqaalkan, waxaan ku tusinaa asalka ugu quruxda badan barta korantada.
Ma rabtaa inaad naqshadayso funaanad? Markaa waxaad u baahan tahay majaajilo funaanad si aad macmiilka ugu siiso aragti dhab ah.
Naqshadaynta ugu yar ayaa si sii kordheysa uga jirta naqshadaha aqoonsiga. Maqaalkan waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah calaamadaha ugu yar ee ugu fiican.
Taariikhda astaanta Pepsi
Weligaa ma is weydiisay waxa ay tahay Taariikhda astaanta Pepsi? Waxaan kuu sheegaynaa sida astaantan ay u horumartay iyo halka ay ka timid.
Aaladahan si aad u aqoonsato xarfaha waxaad kaydin doontaa waqti badan oo waxaad ogaan doontaa xarfo aadan aqoon. Soo gal oo soo ogow.
Daabacaadda wanaagsani waxay ka dhigi kartaa boodhka mid aad u xiiso badan. Maqaalkan, waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah xarfaha ugu fiican.
Ma waxaad raadinaysaa weji saxeex ah oo xiise leh, indho-qabad leh oo ku habboon shakhsiyadaada? Waxaan soo jeedineynaa dhowr ikhtiyaar oo ku saleysan isticmaalkeeda.
Qaababka Barta Awooda Dhaqan ee Bilaashka ah
Samaynta bandhig faneedka waxay qaadataa waqti dheer. Sidaa darteed, halkan waxaan kaaga tagaynaa qaar ka mid ah qaababka Power Point-ka ee bilaashka ah.
Astaamaha iyo macnahooda
Astaamaha ayaa naga caawiyay inaan wada xiriirno oo ay noo fududeeyeen mararka qaarkood. Qoraalkan, waxaan ku tusineynaa waxay yihiin iyo tusaalooyin.
Haddii aadan weli heli karin qaab Shopify ah oo adiga kugu habboon, qoraalkan, waxaan ku tusineynaa mareegaha qaar oo aad ka heli karto.
Sida loo soo saaro midabada sawirka
Haddii aad jeceshay midabka sawirka, laakiin aadan aqoon sida loo soo saaro, halkan waxaan ku sharaxaynaa sida loo soo saaro midabada sawirka.
Warqadda gidaarada wanaagsan waxay ka dhigi kartaa taleefankaaga mid soo jiidasho leh. Maqaalkan waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah asalka ugu wanaagsan.
Hordhacyada Lightroom ee bilaashka ah
Ma ogtahay in ay suurtagal tahay in sawiradaada lagu tafatiro dhowr ilbiriqsi gudahood? Iyadoo presets waa suurtagal. Halkan waxaan kugu soo qaadanaynaa dhawr qolal iftiin oo bilaash ah.
Ma jeceshahay xarfaha guridda? Soo hel qaar ka mid ah xarfaha aad ku isticmaali karto qaabkan, labadaba bilaash iyo lacag.
Haddi aanad wali garanayn halka hab-qaabeedyada ugu fiicani yihiin si aad u dejiso mashaariicdaada. Qoraalkan waxaan kuugu sheegaynaa meesha aad ka heli karto.
Jees-jeesyada buug-yaraha Trifold
Ka caawinta shirkadaha inay fariintooda gaarsiiyaan waa muhiim. Halkan waxaan kuugu keenaynaa mareegaha aad ka heli karto majaajilo loogu talagalay triptychs.
Qaababka bilicda ugu fiican ee bandhigyadaada
Qaababka bilicda leh ayaa na caawiya marka ay naga maqan yihiin waxyiga ama waqti la'aan. Waa kuwan qaar ka mid ah si ay kuu caawiyaan.
Midabada analogga ah
Miyaad taqaannaa midabada isbarbardhigaya? Oo maxay yihiin? Baro wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kuwaas iyo noocyada jira.
Ma ogtahay in ay jiraan xarfo gacanta lagu sameeyay? Gal oo waxaan ku tusi doonaa waxa uu yahay nooca farta qoyska waxaanan ku tusi doonaa tusaalooyin.
Templates PowerPoint BILAASH ah
Ma waxaad raadinaysaa habyaalada barta korontada? Waxaan diyaarinay qaar ka mid ah kuwa xorta ah. Soo hel dhammaantood!
Miyaad u beddeleysaa jadwalka taariikhda daabacan? Habka lahaanshaha jadwalka taariikhda ayaa soo noqday si uu kaaga caawiyo qorshaynta hawlaha, shaqada, cuntada ...
7 qalab si loogu abuuro khariidadaha fikradda qadka iyo mobilkaaga
Qoraalkan waxaan ku soo uruuriyay 7-da qalab ee bilaashka ah si aan ugu abuuro khariidadaha fikradaha khadka tooska ah iyo taleefankaaga gacanta.
Aragtida Midabka: Tilmaamaha Aasaasiga ah ee Isku Darka Midabbada
Qoraalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa sida aad u adeegsan karto aragtida midabka si aad u abuurto isku-dhafnaan kaamil ah iyo palettes.
Qoraalkan waxaan ku soo uruurinnay 5 beddelaha ugu wanaagsan ee xarfaha quruxda badan si aad uga heli karto noocyo aan caadi ahayn oo la yaab leh.
Weligaa ma isweydiisay inta nooc ee waraaqda daabacaadda ah ay jiraan? Raadi kuwa ugu isticmaalka badan iyo astaamahooda.
Waa maxay cabirka lagu taliyay ee kaarka ganacsiga?
Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa lagu taliyey kaarka ganacsiga si aad adigu u dooran karto qaabka kuugu habboon.
Qalabka Photoshop waa kheyraad si ballaaran ay u isticmaalaan naqshadeeyayaasha. Baro meesha si fudud looga soo dejisan karo iyaga mashaariicdaada.
Ma waxaad dooneysaa warqad dhejis ah? Halkan waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin astaamaha iyo nooca farta ah ee aad ku isticmaali karto boorarka.
Midabada hore: maxay yihiin iyo 50 gogol-xaadh iyo fikrado la isku daro
Haddii aad rabto inaad bilowdo ku darista midabada hore ee naqshadahaaga, ha seegin boostadan halkaasoo aad ka heli doonto fikrado ku saabsan sida la isugu daro.
Moodo-qorista qarniyadii dhexe
Soo hel xulashada noocyada qarniga dhexe ee mashaariicdaas aad gacanta ku hayso ee u baahan nooc font nooc ka duwan.
Noocyada ugu wanaagsan ee lagu abuuro astaamaha
Ma u baahan tahay noocyada astaamaha astaamaha oo miyaanad garanayn midka ugu fiican? Halkan waxaan kaaga tagnay xulasho qaar ah oo aad ugu adeegsan karto mashaariicdaada.
In ka badan 35 plugins Photoshop iyo miirayaasha
Ma u baahan tahay shaandhooyin Photoshop ama plugins? Ha seegin liistadan ku darista bilaashka ah ee barnaamijka Adobe oo aad hubaal ka heli doontid waxtar.
Waa maxay favicon
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa favicon yahay, maxay muhiim u yihiin iyo sida loo sameeyo mid ka mid ah websaydhkaaga, halkan waxaan ku siineynaa dhammaan macluumaadkaas.
37 arrimo diblooma oo bilaash ah
37 sheybaar diblooma oo bilaash ah si aad diblooma ugu siiso koorso, dabaaldeg ama munaasabad kale.
Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah
Haddii aad raadineyso meesha aad ka soo dejisan karto xarfaha bilaashka ah haddaba halkan waxaa ku yaal xulashooyin aad isticmaali karto si aysan waxba kuugu kici doonin.
Barnaamijyada ugu fiican ee wax laga beddelo sawirrada
Soo ogow kuwaas oo ah barnaamijyada ugufiican si aad wax uga beddesho sawirada ka dhex jira noocyada kala duwan ee aad ka dooran karto labadaba bilaash iyo lacagba
Xarafyada farta ah: noocyada aan ku talinno
Haddii aad raadineyso far qoraal ah oo calaamado ah oo aadan hubin meesha laga bilaabayo, ama sida ay u ekaan karaan, halkan waxaa ku yaal fikrado wanaagsan.
Hal abuur ahaan, waa inaad taqaanaa dhammaan qaababka muuqaalka ee ay tahay inaad ku shaqeyso. Ma taqaanaa inta tiradoodu tahay iyo kuwa caadiga ah?
Soo ogow waxa ASCII Farshaxanku yahay, sida uu uga duwan yahay kuwa kale, noocyada Farshaxanka ASCII iyo barnaamijyada aan kugula talineyno qaabkan farshaxanka.
CorelDraw X5 la qaadi karo oo bilaash ah
Maanta waxaan u mahadcelinayaa barta saaxiibtinimada waxaan helay nooca la qaadi karo ee Corel Draw X5 oo aan ku soo dejisto bilaash.
Sida loo isticmaalo Canva: soo ogow waxa ay tahay iyo sida loogu qaabeeyo Canva
Qoraalkan waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo Canva si aad u bilowdo inaad ku raaxaysato dhammaan ilaha ay bixiso. Soo gal oo ha moogaan!
Websaydhyada ugu fiican (ama barnaamijyada) si loogu beddelo sawirka JPG ICO
Tixraacyo taxane ah oo khadka tooska ah loogu beddelo sawirka JPG-ga loo yaqaan 'ICO' haddii aannaan rabin inaan dhex marno rakibaadda barnaamij.
Dib u cusbooneysii tusaalooyinka si aad u soo dejiso oo aad naftaada u soo bandhigto sidii hore oo kale heer xirfadeed
Diyaar ma u tahay shaqadaada ugu horeysa? Inaad hesho mid kale oo si fiican u bixiya? Isticmaal mid ka mid ah bogagga shabakadda dib-u-dhiska
Goobaha ugufiican ee Soodejiya Tusaalooyinka Powerpoint ee Hada
Kala duwanaansho ballaaran dhammaan qaybaha suurtagalka ah ee bandhigyada mashruuca ama la shaqee kuwan sheybaaradan Powerpoint.
Adobe Stock wuxuu sii daayaa in kabadan 70.000 oo Hantida Bilaashka ah - Sawirro, Vector, Sawirada, iyo Inbadan
Adobe wuxuu ku biirayaa kacdoonka dhijitaalka ah inuu ka bixiyo wax kabadan 70.000 hanti bilaash ah Adobe Adobe maanta.
Font-kan qarinaya ***** waa wax weyn
Xitaa waxay awood u leedahay inay bedesho fartaan la yiraahdo The Polite Type erayada weerarada kuwa waxyeelada yar. Fikrad weyn.
Astaanta qalaad ee Expo 2025 ee Osaka ee Japan
Bandhigga adduunka ee Osaka 2025 ayaa soo bandhigay astaantiisa cajiibka ah ee aan meelna uga bannaanayn wax, laakiin aad iyo aad u yar.
Wax Kasta Oo Aanad Ka Ogayn Barashada Midabka
Ma rabtaa inaad barato sida loo abuuro midabbo iswaafajsan oo shuqulladaada ah oo waliba saamayn gaar ah ku leh kuwa kale? Tani waa boostadaada.
Lottiefiles waa websaydh animations ah websaydhkaaga muhiimka ah laga bilaabo maanta
Animations tayo sare leh si ay u keenaan mashruucyadayada shabakadda ee ka socda Lottiefiles, oo ah barxad cusub oo dadka siin doonta inay hadlaan.
Adobe ayaa cusbooneysiineysa astaanteeda iyo aqoonsi u gaar ah
Dib-u-habeyn dhammaystiran oo ku saabsan aqoonsiga sumadda Adobe iyo calaamaddaas cusub ee Adobe oo leh midab cusub oo "diiran" oo casaan ah.
Waxaa jira calaamado qaarkood oo u dhawaaqaya samooyinka qallooca. Astaamo si xun loo qaabeeyey oo naqshadeeyehani horumariyay.
Yaab leh ugu yaraan daraasaddan oo muujineysa in laga yaabo inaan khalday xarafka "g" nolosheena oo dhan oo aan ogeyn.
McDonald's wuxuu raaligalin ka bixinayaa dhadhamin la'aanta bedelida astaanteeda
Waa inaad aad uga taxaddartaa markaad isku dayeyso inaad ka faa'iideysato cudur faafa. McDonald's ayaa ku xanuunsaday hilibkooda.
Astaamaha loo yaqaan 'Iconic logos' oo dib loo habeeyay xilligii coronavirus
Waxay siinaysaa maroojin calaamadaha caanka ah ee caanka ah si loo turjumo xilligan xaadirka ah ee cudurka loo yaqaan 'coronavirus' iyo sida bulshadeennu isu beddeli doonto.
Xayeysiintan fikradda ah ee Adidas waa mid heer sare ah
Waa wax lala yaabo waxa lagu gaari karo sawirka fudud ee xariiqa jiifka ah ee Adidas saddexda xarriiq ee qarka u saaran.
Marka noocyada waaweyni ay sidoo kale khatar geliyaan astaantooda: kiiska BMW
Isbeddelo halis ah oo ku saabsan astaanta cusub ee BMW taasina waxay keenaysaa hawo cusub oo ah nooca gawaarida Jarmalka sanadahan.
Bixinta ugu fiican ee koorsooyinka onlaynka ah ee loogu talagalay hal-abuurka 'Domestika' oo keliya $ 9,90. Naqshadeynta naqshadeynta, qaabeynta fiidiyowga, naqshadeynta websaydhka, dhammaantoodna in ka yar $ 10 HALKAN >>
Astaanta cusub ee NASA ayaa u dabaaldegeysa haweeneyda dayaxa u dirtay
Artemis waa ilaahadda Giriigga ee dayaxa iyo mataanaha walaasheed ee Apollo, ilaaha Griiga ee asalka u ah magaca hawlgalkii ugu horreeyay ee Dayaxa.
Astaanta cusub ee Ciyaaraha Olombikada 2024 ee ka socota Paris ee bartamaha jees jeeska ah
Jees jees iyo qosol roob on astaanta cusub ee Paris 2024 Olombikada markii aynaan ogeyn haddii aan la macaamilno salon qurxin ama barnaamij shukaansi
Glaze waa bakhaar weyn oo cusub oo sawiro bilaash ah oo aadan seegi karin
Glaze waa bakhaar cusub oo bilaash ah, sawirro tayo sare leh oo lagu garto midabyo hufan oo fidsan.
4 noocyada ugu badan ee la isticmaalo
Xulashada nooca qoraalka waa weji aad u muhiim ah oo naqshadeynta ah. Waxaan kuu soo bandhigayaa liis yar oo ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Ku soo hel boostadan.
Monotype waxay bilaabeysaa abaalmarinteeda si ay u dhasho noocyo u heellan qoraalka
Abaalmarinta Nooca Abaalmarinta waxay u adeegi doontaa inay diirada saarto noocyada ay ka go'an tahay inay qaabeeyaan noocyada noocyada heer sare.
Tani waa magac-bixinta 'Twitch', adeegga qulqulka ciyaarta oo heer sare ah
Twitch waa adeegga qulqulka ciyaarta si heer sare ah sanado badan ka dib waxay la timaaddaa isbeddelo waaweyn oo ku saabsan sumcadeeda.
Waxaan ku tusineynaa calaamadaha ay iibiyaan iyo sida kuwa yar yar aysan u soo jiidan isha isha iibsadaha si ay xitaa u ogaadaan faa'iidooyinka.
Qorshaynta baraha bulshada waxay qaadataa waqti badan iyo u hurid. Waxaan soo jeedinayaa talooyin dhowr ah oo loogu talagalay qorsheynta shabakadaha bulshada bil kasta qaab fudud.
Duolingo Wuxuu Soo Bandhigay Font Cusub Oo Si Buuxda U Qabanaya Shakhsiyaddaada
Font-ka cusub ee loo yaqaan 'Duolingo font' waxaa loo sameeyay si uu si fiican ugu ekaado naxariista xayawaankaaga guumaysta Adeeg loogu talagalay barashada luqadaha.
Markaadan waligaa sameyn doonin qalad naqshad sida astaamaha Chicago Bulls
Astaanta Chicago Bulls waxay leedahay cillad naqshadaysan oo muuqata markii la rogo. Sidan oo kale ayey ahayd tan iyo 1966-dii oo cidina ma ogaan.
FreebiesByPeople waa degel cusub oo kuu keenaya dhammaan noocyada waxyaabaha bilaashka ah sida mawduucyada, ebook-yada, noocyada, noocyada 3D iyo waxyaabo kale oo badan.
Xarfahaan midabaynta waxaan kugu tusaynaa noocyo kaladuwan oo jira iyo xiriiriyeyaal taxane ah si aad u soo dejiso oo aad u awoodo inaad jarjarto iyaga oo horey loo daabacay.
4 tixraac xisaabaadka Instagram
4 Xisaabaadka 'Instagram' waxay u adeegi doonaan tixraac si ay kuugu dhiirrigeliyaan markaad bilowdo mashaariicdaada. Ku soo hel boostadan.
Tani waa muuqaalka cusub ee nooca Android
Iyada oo la adeegsanayo Android 10, weyn ee G wuxuu fursad u siinayaa astaan ​​cusub iyo aqoonsi summad leh oo midabkeedu u noqon doono halyeeyga sannadaha soo socda.
Markasta oo aad dhoola cadeyn karto astaantaada
Aqoonsiga cusub ee Canada Jetlines wuxuu noo keenayaa ukun casri ah oo wajigeeda ku qarinaysa qosol soo jiidasho leh.
Template si aad u qaabeyso taraafikada
Haddii aad diyaarinaysid nashqadda taraafikada, qaab-dhismeedkan ayaa hubaal ku imaan doona si uu kuu hago. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga fogaato khaladaadka
10 websaydh oo aad ka dhigi karto faylalkaaga si dhakhso leh, fudud oo bilaash ah
Naqshadeeye kasta waxaa aad muhiim u ah in loo helo faylalka internetka ee shaqadooda halkaasoo macmiil kasta oo macquul ah uu ku arki karo shaqadeena ...
50 Tusaalooyin Logo Movie Cool
Shineemo waa mid ka mid ah maadooyinka bixiya ciyaar badan qaabeynta, maaddaama aan ka hadleyno anshax ...
Lunacy waa tifaftire sawir-arag ah oo la shaqeeya faylasha .sketch
Haddii aad la macaamilayso faylasha .sketch, ka fikir Lunacy inay tahay beddel dhab ah oo loogu talagalay Windows 10 iyadoo xitaa la fulin karo xilliyadaas qadka.
IKEA waxay sameysay nooc cusub oo loo yaqaan Soffa Sans oo qof walba heli karo, kaas oo ah midka ugu raaxada badan ee abid dunida laga arko.
Noocyada ugu caansan ee sans-serif
Sans Serif noocyadu waa kuwa aan ku aragnay filimo badan oo xitaa ay adeegsadaan magacyaal waaweyn….
Marka calaamadda aan rasmiga ahayn ee Tokyo Olympics ay ka wanaagsan tahay rasmiga haa
Newman ma uusan fileynin in astaanta fikradiisa ay saameyn noocan oo kale ah yeelaneyso markii uu bartiisa xiriirka bulshada soo dhigay maalmahan.
Soo dejiso qaar ka mid ah noocyada qaabka baseball-ka si aad ugu adeegsato naqshadahaaga waxayna u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh.
Pizza Hut wuxuu dib u soo celiyaa astaamihiisii ​​saqafka casaa ee caanka ahaa
Pizza Hut waqti iskama lumin oo waxay ku noqotay xididkeedii iyadoo la timid astaantii aan aragnay dhowr iyo tobanka sano ee leh casaanka iyo saqafkaa gaarka ah.
Abuur muuqaal macquul ah daqiiqado gudahood barnaamijka webka ee Photocreator
Iyadoo loo adeegsanayo Photocreator waxaad ku abuuri kartaa muuqaallo macquul ah daqiiqado gudahood taas oo ay uga mahadcelinayaan dhammaan hantida ay u diyaarineyso inay kala soo baxdo JPEG.
Wax walba sii, xitaa haddii ay tahay Ragged ama qosol
Badal aragtidaada, habka aad wax u aragto, qatar u gal, iskuday, dadka kale ka fiiri meel kale, adduunkan, taasi waa, waxa Desigual yahay.
Kani waa astaanta cusub ee loo yaqaan 'Firefox' iyo qoyskeeda
Waxay ku qaadatay Mozilla 18 bilood inay soo gaadho maanta si ay u muujiso astaanta cusub ee Firefox iyo qoyska la socda.
Kani waa astaanta cusub ee loo yaqaan 'X-Men logo' oo ay soo saartay shirkadda 'Marvel'
Astaan ​​cusub oo loo yaqaan 'X-Men' oo lagu arki doono majaajilladaha cusub ee lagu arki doono khaanadaha dukaamada badan xagaagan.
DC waxay muujineysaa astaan ​​cusub oo loogu magac daray League League
DC waxay soo saartay astaan ​​cusub oo loogu magac daray Justice League oo lagu arki karo majaajillada cusub ee la soo saaray 5-tii Juun waxayna keeneysaa xoogaa isbeddel ah.
Ku abuuro farriimo caan ah oo layaableh noocyo farshaxan leh barnaamijka 'EnFont Terror web app'
In EnFont Terror waxaad awoodi doontaa inaad jarto xarfaha caanka ah si aad u badbaadiso oo aad u hesho kala duwanaansho taas oo ah beddel dhif ah.
ICONSVG, oo ah degel bilaash ah si aad u habeyn karto astaanta SVG
ICONSVG waa degel aad ka soo dejisan karto oo aad ka koobiyeyn karto koodhka ka dhashay astaantaas gaarka ah ee SVG naftaada.
Sida loo helo isku-darka font ee ugu fiican
Typ.io waa degel cusub oo aan ku soo bandhigi karno ilo nagala taliya waxa noqon kara iskudhaf weyn iyo tusaalooyin dhab ah.
Sida loo abuuro astaan ​​saddex-midab leh oo sawir ah
Istaraatiijiyad lagu abuurayo astaan ​​ka kooban seddex midab oo sawir leh iyadoo la isticmaalayo marinnada Photoshop iyo baafinta sawirka ee Sawirka.
Si dhakhso leh u waafaji sawiradaada shabakadaha bulshada adigoo adeegsanaya "Reso Image Resizer"
Si dhakhso leh ula qabsada mid ka mid ah sawirradaada shabakad kasta oo bulsheed oo aad u baahan tahay sida Facebook, Twitter, Instagram iyo wixii intaa ka sii badan
FontSpark waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato qaabka ugu fiican ee aad u raadineyso mashruucaaga
FontSpark waa barnaamij ka shaqeeya webka oo u shaqeeya sida soojiidashada oo fikrad na siin doonta iyadoo loo eegayo mowduuc gaar ah iyo tilmaamo kale oo ay tahay inaan siino.
In kabadan 18.00 waxyaabaha kirismaska ​​ee naqshadahaaga kaliya $ 19!
Salaanta kirismaska ​​waxaan haynaa xirmadan oo aan ku hayno boqolaal waxyaalood oo kirismas ah oo loogu talagalay kaararka iyo waxyaabo kale oo badan.
Soo qaado astaamaha kirismaska ​​ee xayeysiinta bilaashka ah ee Adobe ee SVG iyo PNG labadaba
Mawduuca Kirismaska, Adobe wuxuu u beddelaa Santa Claus si uu u siiyo boqolaal astaamo muuqaal ah oo SVG iyo PNG ah.
Kaararka dijitaalka ah ee Kirismaska
Ha lumin dhaqanka oo ugu hambalyee xiriiradaada WhatsApp-ka oo leh kaarka kirismaska ​​ee shaqsiga ah. Waxaad haysataa ikhtiyaarro badan, noqo kuwa asalka u ah kooxda
Kalandarka bilaashka ah ee 2019
Sanadkan cusub ee 2019 ayaa soo dhowaaday waana inaan u diyaar garowno. Waxaan kaaga tagi doonaa taxane ilaha bilaashka ah.Waa inaad u diyaar garowdaa!
Websaydhada si loo soo dajiyo GIF's
GIFs waa kuwo aad u deg deg badan in la sameeyo, laakiin taa ka sokow, waxaan ka heli karnaa degello internetyo badan oo bilaash ah oo bilaash ah. Waxaan ku siineynaa liistada goobaha ugu fiican.
Typekit hadda waa Adobe Fonts iyo qayb ka mid ah Creative Cloud
Haddii aad leedahay akoon bilaash ah Adobe Creative Cloud waxaad isticmaali kartaa maktabadda aasaasiga ah ee Adobe Fonts, magaca cusub ee Typekit.
FC Barcelona ayaa casriyeysay gaashaankeeda
Barça-ka caanka ah wuxuu sameeyaa maalgashi sumadeed si loo cusbooneysiiyo loona la qabsado dadweynaha cusub. La soco toddobada isbeddel ee gaashaankiisa cusub.
Kheyraadka sawirka: icons
Haysashada kheyraad badan oo kaladuwan ayaa fududeyn doonta fulinta mashaariicda. Qoraalkan waxaan fududeyneynaa hawsha raadinta websaydhka ugu fiican, soo hel iyaga.
Uber iyo Uber Eats waxay bilaabeen astaan ​​cusub
Uber ayaa kaliya ku dhawaaqday inay ku cusbooneysiisay barnaamijyadooda moobaylka astaan ​​cusub oo si fiican uga tarjumeysa isbeddelada astaanta.
Daraasad ayaa muujineysa noocyada ugu isticmaalka badan iyo iskudhafka saamaynta ugu weyn ku leh degellada websaydhka
Haddii aad raadineysid dhiirrigelin boggaaga soo socda, daraasaddan oo ay soo saartay Icons8 waa mid waajib ku ah inay sii socoto.
Evernote waxay ka shaqeyneysaa astaanteeda cusub si loogu dabaaldego sanadguuradeedii XNUMXaad. Barnaamijkan xusuus-qaadashada ah ayaa nala socday muddo toban sano ah.
Muhiimadda astaanta u leedahay qaabeynta bogga
Waxaa muhiim ah in laga feejignaado dhammaan walxahaas oo saameyn ku leh sameynta astaan ​​iyo ilahaas si looga faa'iideysto suurtagalnimadeeda.
Qalabkan weyn ee moodellada shirkadaha iyo xaashiyaha waraaqaha ah waxaad ku heli kartaa buug-yare aad u ballaadhan oo aad ugu tagi karto dhammaan noocyada macaamiisha.
Photoshop waa aalad awood badan oo naqshadeeyayaashu isticmaalaan maalin kasta, waxyaabahan lacag la’aanta ah ee bilaashka ahi waxay kabayaan fursadaha
Waan arki karnaa sida sannadkan 2018 iyo kan ugu yar iyo kan ugu dhow ee 2017 ay isbeddello ugu yimaadeen astaamaha noocyo badan tusaalooyinkan ayaa la hayaa
Soo bandhigid aan la inkiri karin: Saamaynta qoraalka Photoshop waxay ku xiran tahay 90% off
Qoraalkan saamaynta qoraalka ah ee loogu talagalay Adobe Photoshop ayaa 90% laga joogaa inuu joogo $ 19. Waxay leedahay noocyo kala duwan oo saameyn qoraal ah sida dahab, bir, alwaax, guridda iyo kuwo kale oo badan.
Dukaanka Font: 20 nooc oo ku habboon mashruucyadaada
Dukaan ka mid ah noocyada bilaashka ah iyo kuwa ku habboon ee loogu talagalay mashaariicda ugu hal abuurka badan ee aad maskaxda ku hayso. Liiska soo socda ee noocyada ah ee aan ku bixinno Hal-abuurka 'Online' ayaa ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan helnay.
Daniel Carlmatz waa naqshadeeye iskiis isu taagay inuu abuuro 365 logos oo leh macno qariya isla qaab qorista.
15 jees jees ah oo loogu talagalay kaararka ganacsiga oo leh naqshad yar
Haddii aad rabto inaad naqshadaha kaararkaaga ganacsiga ka dhigto mid u muuqda sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan, halkan waxaad ka heli doontaa 15 ikhtiyaar oo ah qaab jeesjees ah oo loo yaqaan 'minimalist style style mockups' oo ku habboon.
15 Falalka Photoshop si aad wax uga beddesho sawiradaada
Haddii aad raadineyso inaad kordhiso waqtigaaga shaqada, ha ku lumin waqti ku celcelinta isla talaabooyinkaas si aad u gaarto natiijada ugu dambeysa ee la filayo. Si kafiican u adeegso ficilo sawir qaade oo gaar ah oo kaa caawin doona inaad siiso sawiradaada qaabka aad raadineyso Halkan waxaan ku soo uruurinay kuwa ugu fiican.
Theo Jansen's Xayawaanka Xeebta Surreal
Theo Jansen waa farshaxan sameeye xayawaanka macmalka ah ee ugu macquulsan ee aan qiyaasi karno. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida mashiinadan cajiibka ah ay u shaqeeyaan oo mideeya injineernimada iyo farshaxanka sidii hore aan u arag.
American Express ayaa dib u naqshadeynaysa astaanteeda markii ugu horreysay muddo 40 sano ah
Waxay ahayd waqtigii kaarka hay'adda sida American Express cusbooneysiin lahaa astaantiisa, in kasta oo ay sidaa ku sameysay si taxaddar leh, oo calaamadda saareysa bilicsanaanta midabka asalka ah.
20 ilo muhiim ah naqshadeeye kasta waa inuu ogaadaa
Weligaa ma isweydiisay sida loo kordhiyo socodkaaga shaqada loona hagaajiyo waxqabadkaaga naqshadeeye ahaan? Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa 20 kamid ah ilaha ay isticmaaleen naqshadayaasha ugufiican.
Noocyo bilaash ah oo asal ah oo ku habboon mashaariicda hal-abuurka ah
Halkan waxaan ku soo aruurineynaa 15 nooc oo caan ah oo bilaash ah oo caan ah oo bilaash ah oo ku habboon mashaariicdaada hal abuurka badan. Ka soo dejiso Sans serif, noocyada tijaabada ah.
10 goobood oo lagu soo dejiyo astaamaha warbaahinta bulshada ee mashaariicdaada
Qodobkaan waxaad kaheli doontaa 10 websaydh oo kufiican si aad uhesho astaamaha warbaahinta bulshada oo tayo leh una ogolaan kara cabirka iyo midabeynta
Xulashada kaftanka kaararka ganacsiga ee ugu habboon mashaariicdaada
Maqaalkani waxaan kuugu keenaynaa nacasyada kaararka ganacsiga ee asalka ah kuwaas oo ka dhigi doona dhammaan mashaariicdaada garaafka iftiinka.
Websaydhyada ugu wanaagsan ee lagu soo dejisto sawirrada isha furan
Kuwani 19 shabakadaha sawir furan ee furan waa kuwa ugu fiican ee aad ka heli karto shabakadda maanta dhammaan noocyada noocyada. Raadinta sawirro tayo leh oo bilaash ah? Ha seegin ilahaan si aad u hesho.
25 nooc oo bilaash ah oo ku habboon dhammaan noocyada naqshadeeyayaasha
Ma rabtaa inaad kala soo baxdo noocyada bilaashka ah? Halkaan waxaad ka heleysaa ururinta wanaagsan ee xarfaha hadda iyo bilaashka ah oo qayb ka noqon doona liiska aad u hayso dhammaan noocyada macaamiisha iyo shaqooyinka.
30 PSD jees jees ah oo loogu talagalay nashqadeynta tifaftirka
Maqaalkan waxaan ku soo aruurineynaa jeesjeesyada ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee naqshadeynta tifaftirka sida boodhadhka, joornaalada, buugaagta, xaashiyaha iyo qoraallada.
10 isbeddellada qaabdhismeedka sannadka 2018 ee ay tahay inaynaan gadaal uga tegin
Isbedelada qaab qoraalka ee muhiim u noqon doona naqshadahaaga astaanta ama farriimaha caqliga leh, laakiin haddii aad tobankan u isticmaasho sannadkan, waxay kaa dhigeysaa inaad macmiilkaaga saxdo.
Baro sida loo isticmaalo qalabka qalinka ee Photoshop
Baro sida loo isticmaalo qalabka qalinka ee Photoshop: Qalinka. Qalab adag oo casri ah oo ku siin doona fursado aan dhammaad lahayn markaad abuureysid shiraacyadaada.
Waxaan ku tuseynaa bogag shabakado leh ilo bilaash ah oo loogu talagalay shaqadaada
Waxaan ku siineynaa liistada boggaga leh ilo gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay shaqadaada. Ka bilow Shabakadda Creativos Online oo waligaa ha dhammayn.
Soo Degso Qalabkan Icon Adobe XD CC ee Bilaashka ah oo ay abuureen naqshadeeyayaasha halyeeyada
Adobe ayaa sii deyneysa seddexdan xirmooyinka astaanta ah ee bilaashka ah ee nashqadeeyayaasha halyeeyga ah si aad ugu isticmaasho Adobe XD ama mid ka mid ah barnaamijyada Creative Cloud.
Sawir gacmeedyo dhididka leh naqshadahaaga ugu fiican
Sawir gacmeedyo dhidid leh naqshadahaaga ugufiican kuna dhiirrigeli shaqadaada oo dhan qaab shaqsiyeed iyo soo jiidasho leh. Haddii aad jeceshahay dunta dharka, waxaad bilaabi kartaa inaad aragto sida shaqadaada jaantuska ah loogu adeegsado warbaahinta kale.
Xarafyada ugu waaweyn ee 31 Fonts Xilligan loogu talagalay Naqshadayaasha
31 noocyada bilaashka ah ee bilaashka ah ee udub dhexaadka u ah isla markaana leh ujeedooyin kala duwan dhammaan noocyada shaqooyinka nashqadeeyaha u baahan karo.
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo kordhiyo shaqadaada? Waa kuwan qaar ka mid ah tabaha Sawirka iyo toobiyeyaasha si ay kaaga caawiyaan inaad si hufan u shaqeyso
Websaydhyada ugu fiican ee ku saleysan sawirrada SVG
Sawirada SVG, mahadsanid miisaankooda yar, ayaa aad ugu ansax ah sameynta khibradaha websaydhka sida kuwa ka muuqda websaydhyada.
39 nooc oo bilaash ah Kirismaska
39 nooc oo bilaash ah oo loogu talagalay adeegsiga shakhsi ahaaneed ee aadan ka maqnaan karin. Iyaga waxaad ka heli doontaa kaararkaaga kirismaska ​​si ay u yeeshaan taabashadaas gaarka ah.
Sida loo abuuro kaararka kirismaska ​​ee shaqsiyan leh wajigeena si aad u hesho hadiyad asal ah oo hal abuur leh Kirismaskan.
Kuwani waa cabbirka waraaqaha ee A, B, C iyo in ka badan oo waafaqsan heerarka kala duwan, in kasta oo ay jiraan cabirro kala duwan oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah.
Font-ka cusub ee BBC-da
BBC-du waxay kiraysatay istuudiyaha Dalton Maag si ay u tarjunto una abuurto font-ka cusub ee BBC Reith kaas oo xambaarsan himilada aasaasihii warbaahintu.
Dhulku sida farshaxanka: sawirada dayax gacmeedka barnaamijka Landsat
Sawirada ay qaadeen barnaamijyada dayax gacmeedka Landsat ayaa ah matalaad farshaxan oo cajiib ah oo ku saabsan meeraha Dunida.
15 nooc oo cusub oo qasab ah, bilaash!
Maxay yihiin noocyada cusub ee loo baahan yahay inay lahaadaan noocyada naqshadeeyayaasha? Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah ee muhiimka ah ee naqshadayaasha?
Shantaan shey oo tayo leh kaararka kirismaska ​​ayaa ka duwan kuwa kale oo badan tayadooda sare iyo taabashadooda gaarka ah.
Soosaarayaasha astaanta cusub: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhaliya astaanta? Hawlgalka matoorrada astaanta. Naqshadeynta astaanta degdegga ah
Ka hel in ka badan 250 buugaag farshaxan oo bilaash ah Madxafka 'Getty Museum'
Matxafka 'Getty Museum' wuxuu ka dhigayaa in ka badan 250 buugaag farshaxan ah oo ay heli karaan qof kasta oo aad ku soo dejisan karto PDF ama aad ku arki karto Buugaagta Google.
Waa tan sida 156 qof ay uga soo qaataan astaamaha astaanta caanka ah xusuusta
Ma awoodi doontaa inaad xusuusato naqshadda iyo midabka astaanta wadnaha? Tani waa sababta daraasaddan ay ku samaysay degel.
"Midab weydiin" oo leh Photoshop.
Maanta waxaan ku bari doonaa saamaynta midabbada caadiga ah ee Photoshop, oo mararka qaarkood naga caawiya inaan si dhakhso leh uga baxno jidka.
Sida loo abuuro astaan-biyood leh Photohop
Sida loo abuuro astaan-biyood leh Photohop si dhakhso leh, ilaalin iyo iftiiminta dhammaan mashaariicdaada garaafka ah. Ka ilaali sawiradaada xatooyo!
Sida loogu soo bandhigo kaarka ganacsiga macmiil si hal abuur leh si fiican loogu iibiyo fikradda loona gaaro natiijo xirfad leh.
10 Xirmooyinka UI ee Wanaagsan ee Loogu Soo Degsado Bilaash
Qalabka UI waa fayl ay ku jiraan dhowr waxyaalood oo horay loo sii qorsheeyay, sida badhamada, astaamaha, miisaska, foomamka, kuwa wax lagu dhejiyo, iyo qaar kaloo badan.